Friendship Car Showroom - Home | Facebook
You were redirected here from the unofficial Page: Farmer Auto
See more of Friendship Car Showroom on Facebook
11,161 people follow this
No.9, Kabaraye Pagoda Road, Golden Valley Ward 2, Bahan, Yangon, Myanmar (8,565.16 mi)
+95 1 554 633
Car Dealership · Tour Agency
Hours 9:00 AM - 5:45 PM
PlacesYangonTravel & TransportationTours & SightseeingFriendship Car Showroom
this showroom is the best good service and cars
my car is still nr 1
KO Aung SI Thu
i like this. i life work.
Aye Moe Moe Naing
Toyota RAV4 2001 model 1800cc how much in local Currently price. Please message thanks
Htet Khine Kyaw
good! My crazy is car !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Saung Hnin Pann
သိန်း၅၀ အရင်​သွင်းပြီး ၁လ ၃သိန်းခွဲခန့်​ အရစ်​ကျ သွင်းလို့ရမယ့်​ ကား​လေးရှိပါသလား သိချင်​လို့ပါ
Hijet တစီးလောက်ဝယ်ချင်ပါတယ် အရစ်ကျနဲ့ရမလားရရင်ဝယ်ချင်ပါတယ်ခဗျာ ဆက်သွယ်ပေးပါ ၀၉၂၅၆၄၁၆၂၂၈
ကားအရစ်​ကျလိုခြင်​ပါတယ်​ပိုင်​ဆိုင်​မှု့ပြပါ့မယ်​ ၁၁၀သိန်းဝန်းကျင်​ကား ကို ကနဦးသိန်း၄၀သွင်းပြီးကျန်​​ငွေကိုတလ၃သိန်း​ပေးပါ့မယ်​။ ဘလိုတွက်​​ပေးလဲခင်​ဗျ
Toyota wish 2003/ 2004 ထဲး 230. တန် လောက်များရှိမလားဗျ အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်ချင်လို့ပါ
မင်္ဂလာပါအစ်ကိုညီမကautomobile car journalကပါအစ်ကိုတို့ကြော်ညာထည့်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် ညီမရဲ့phoက09254279430ပါ
Tun Thein Mg Thein
CANTER (10)ပေ နောက်ဖုံးHydrolic နှင့်လိုချင်တယ်
Friendship Car Showroom shared ကားများအကြောင်း - for Myanmar's post.
ကားများအကြောင်း - for Myanmar added3new photos.
အမေရိကန်စစ်တပ်မှာသုံးတဲ့ Humvee ကိုသိမှာပါ။ ကားက ဗျက်အကျယ်ကြီး ပါ။ ဘာလို့ကျယ်ထားရလဲ ဆိုရင် လမ်းမရှိတဲ့နေရာ သွားလို့ ခက်တဲ့နေရာမှာ Tank ကားချန်ခဲ...့ တဲ့ ဘီးရာ နဲ့ကွက်တိ လိုက်မောင်းလို့ရအောင် မို့ပါ။ အဲဒိ Humvee ကြီးကို GM က Hummer H1 ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ civilian version ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ spec တွေအချိုး အစားတွေက စစ်သုံးကားနဲ့တူတူပဲ မို့အလွန်ကြီးပါတယ်။ အဲကားကြီးကို အထဲမှာ ခုံတွေဘာတွေကောင်းကောင်း ထည့်ပြီးရောင်းတာပါ။ နောက် ပိုင်းက GM ကသူ့ရဲ့ Chevrolet Tahoe( short version of suburban) ,GMC Yukon နဲ့ Caddillac escalade တို့ရဲ့ Platform ပေါ်မှာ Hummer H2 ကိုတည်ဆောက်ပြီးရောင်းခဲ့ပါတယ်။H2 engine ကလဲ သူ့ ညီအကိုတွေလို V8,6.2L နဲ့ပါ။ H2 ကတော့ ကျတော်နည်းနည်းကြိုက်ပေမယ့် H3 မှာတော့ engine က 3500 ကျော်ဝန်းကျင်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ H3 က Hummer ထဲမှာ အသေးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပါပဲ။ သူက Chevrolet Colorado based ဆိုတော့ Toyota Hilux spec လောက်ပဲရှိတဲ့ ကားပါ။ အဲနောက်ပိုင်း 2010 မှာ Hummer brand ကို GM ကဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ပုံထဲမှာ သာဘယ်လောက်ကွာလဲ ကြည့်ပါတော့။
Friendship Car Showroom shared Thet Win's post.
Thet Win added2new photos.
သင့်ကားလေးနဲ့ ခရီးဝေးထွက်တဲ့ အခါ
တံခါးမှန် အားလုံးပိတ်ပြီး AirCon:
သုံးပါ ။ ဆီစားမှာ မကြောက်ပါနဲ့ ။
ထင်သလောက် မစားပါ ။
Aerodynamic အရ မှန်ပိတ်မောင်းတဲ့ကား...
လေခုခံမှု နဲပါတယ် ။
ကားပြင်ပက ထွက်တတ်တဲ့ ထူးခြားမှု အသံကိုသာ
ဖုန်မရှိတဲ့ ဧရိယာမှာ ခုပြထားတဲ့ ခလုပ်နေရာလေးကို
၅ မိနစ်လောက်ထားပေးပါ ။
ပြင်ပကလေသန့် ခဏ ဝင်ဖလှယ်ပေးရအောင်ပါ ။
AirCon: သဘောသဘာဝ ဆိုတာ
Purified Air မထုတ်ပေးနိုင်ပါ ။
O2 နဲသထက်နဲလေဖြစ်လာမှာပါ ။
ကားက​လေလုံ​နေတဲ့ သ​ဘောက ​လေ​ဝင်​​လေထွက်​အ​ပေါက်​​လေး​တွေလည်း
ကြားကြိုကြားနားမှာ ထား​ပေးထားလို့ ဘယ်​အ​ခြေအ​နေဖြစ်​ဖြစ်​ အသက်​ရှုဘို့
​ခေါင်းထဲမှာ ဒူ​ဝေ​ဝေ ဖြစ်​လာကြတတ်​ပါတယ်​
CO2 နဲ့ H2S ပါ ။
ကားစီးနေတဲ့ ၁ နာရီအတွင်း
အဟမ်း အဟမ်း ဘွတ်
အဟွတ် အဟွတ် အဟမ်း ဆိုတဲ့
စတောမတ်ခ်ျ နဲ့ အူလမ်းကြောင်းက Gas မျိုးစုံလည်း
ဒီကြားထဲ ကွမ်းယာက ထွက်တဲ့ Smell
အလယ်ကိုဟောက ထွက်တဲ့ Smell မျိုးစုံလည်းရှိသေးတယ် ။
ကားထဲ က အမွှေးနံ့ မျိုးစုံကလည်း ရှိသေး
ထွက်လေပဲသိတဲ့ AirCon: effect ကို ဖြေဖျောက်ပေးဘို့ဆိုတာ အောက်စီဂျင်ပဲ ရှိပါတယ်ဗျာ
လူနာကို အရော်ပေး အရေးပေါ် ကယ်ဘို့
ပထမ ဆုံး First Aid ပေးရတာ အောက်စီဂျင်ပါ
​အောက်​စီဂျင်​မ​ပေးနိုင်​ခင်​ အရင်​ဆုံး ​လေ​ကောင်း​လေသန့်​ရ​အောင်​
ဟဲ့ ဟဲ့ မဆို​င်​သူ​တွေ သိပ်​ဝိုင်းမအုံကြနဲ့ ဆိုပီး သတိလည်း​ပေးရပါ​သေးတယ်​
ဒါကြောင့် ကားတစ်စီးကို With Air Con:
ခုပြတဲ့ ခလုပ်မုဒ်ကို မကြာမကြာ
ခင်မင်လျက် --- ကိုသက်
Friendship Car Showroom sharedapost.
‎Tun Lin‎ to က.ည.န (သန်​လျင်​)
December 14, 2017 · Yangon, Myanmar ·
၂.၁.၂၀၁၈ မှစပြီး ကားလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရင်
၂.၁....၂၀၁၈မှာစပြီးသက်တမ်းတိုးချက်သူတွေက ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ မှာ
အနီးကပ်မှရက်ချိန်းမရမှာစိုးတဲ့အမျိုးတွေအတွက်လည်း ၃ လ ကြိုတိုးလို့ရပြီး ဧပြီလမှာသက်တမ်းကုန်တဲ့ကာတွေပါ ရက်ချိန်းယူလို့ရပါတယ်
Friendship Car Showroom shared ကားချစ်သူ's photo.
Friendship Car Showroom shared Lwin Pyin's post.
ကား တစ်​စီးဝယ်​​တော့မယ်​ဆိုရင်​ ဘာ​တွေ ကြည့်ရမလဲ | Lwin Pyin News
♓ ♓ ♓ ♓ ♓
🔯၂၀၀၂ က စတင်ထုတ်လုပ် ပြီး Wagon ကိုယ်ထည်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်အရွယ် အစားကို
♤ ၁၅၀၀ စီစီ တစ်မျိုးသာ ထုတ်လုပ်ပြီး အော်တိုဂီယာလေးချက်ဖြစ...်ပါတယ်။
Chassis ID နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားပြီး
☆ NCP59G တို့ဖြစ်ပါတယ်။
♓Chassis ID အရ ခွဲခြားမယ် ဆိုရင်တော့
¤ NCP58G-2WD- 1500CC,
¤ NCP59G 4WD- 1500CC တို့ဖြစ်ပါတယ်။
• TX G Package,
• TX G Package Limited,
• More ဆိုပြီး လေးမျိုးခွဲခြားထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဂရိတ်အမျိုးအစားအလိုက် အတွင်းခန်းရော အပြင်ပါ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုကွာခြားတာ တွေ့ရပါတယ်။
🔆TX G Package Limited :
ဒီဂရိတ်ကို Chassis ID နှစ် မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး အတွင်းရောအပြင်ပါ ဂရိတ်အပြည့်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
▪ အလွိုင်းခွေ ၁၄လက်မ၊
▪ ရှေ့နောက် Fog Light ၊
▪ နောက်ကင်မရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ မော်ဒယ်ကိုတော့ ရှေ့မီးကြီးကို ဟေလိုဂျင်မီးကြီးတပ်ဆင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အတွင်းခန်းမှာတော့
○ ဒစ်ဂျစ်တယ် အဲကွန်း၊
○ နောက်မှန် သုံးချပ်အရောင်ဝင်ပြီး
○ ဒရိုင်ဘာ ထိုင်ခုံပါဝါ၊
○ DVD Player ၊
○ အော်တီဗီတို့ ပါဝင်ပါ တယ်။
○ ဒရိုင်ဘာ Airbag,
○ Front Passenger Air Bag တွေ ပါဝင်ပြီး၊
○ EBD စနစ်တွေလည်း ပါဝင်တာတွေ့ရ ပါတယ်။
ဂရိတ်ကတော့ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂ မော်ဒယ်မှာသာ တွေ့ရပြီး နောက်ပိုင်း
♧ TX G Package Limited ထုတ်လုပ်ချိန်မှာ More Grade ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ TX G Package Limited ကို အစားထိုးထုတ်လုပ်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဂရိတ်ပိုင်းမှာတော့ အနည်းငယ် နိမ့်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အတွင်းခန်း
● Manual Aircon ဖြစ်တာနဲ့
● မှန် အရောင်မဝင်တာတွေက More ဂရိတ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
♉TX G Package :
Succeed Wagon ရဲ့ ဂရိတ်တွေထဲမှာ တစ်ဆင့်နိမ့်တဲ့ဂရိတ်ဖြစ်ပြီး
☆ Fog Light မပါတာ၊
☆ နောက်ကင်မရာ Option ဖြစ်နေတာ၊
☆ ပါဝါထိုင်ခုံမဖြစ်တာတွေက ဒီဂရိတ်ရဲ့ အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွေကတော့ TX G Package Limited အတိုင်း တူညီပါတယ်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာတော့
■ UL ဂရိတ်လို့ လူသိများပါတယ်။
Chassis ID နှစ်ခုမှာ ထုတ် လုပ်ပြီး ၂၀၁၃ မော်ဒယ်တွေအထိ ထုတ်လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Succeed Wagon ဂရိတ်တွေထဲ မှာ အခြေခံဂရိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အတွင်းခန်း
¤ နောက်မှန်ဝိုက်ဘာ Option ဖြစ်တာ တွေ့ရပါ တယ်။
¤ Fog Light မပါတာ၊
¤ နောက်ကြည့် မှန်နဲ့ ကိုယ်ထည်က အရောင်ကွဲ ဖြစ်နေတာ၊
¤ ရိုးရိုးခွေဖြစ်တာတွေ က ဒီဂရိတ်ရဲ့ ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါ တယ်။
🔘ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲက ရောင်းဈေးတွေကတော့ Succeed
■ TX G Package ၂၀၁၀ မော်ဒယ်ဆိုရင် ကျပ်သိန်း ၁၆၀ ဝန်းကျင်၊
■ TX ၂၀၁၀ မော်ဒယ်ဆို ရင်တော့ ကျပ်သိန်း ၁၄၀ ဝန်း ကျင် ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။
Toyota Probox /Succeed အကြောင်း
🇲🇲 ခိုင်းမှာဆို Probox သာဝယ် ယနေ့ တော်တော်များများ ပြောကြသော ကားလောက အသံများ။
ပရိုဘောက်က ဘာကြောင့် စွတ်ခိုင်းလို့ ကောင်းနေ...ရတာတုန်း, အများစု Probox ကို ရွေးဝယ်နေကြတာလဲ စသဖြင့် လေ့လာမိပါတော့တယ်။
အများစု အသိထပ်နေကြတာက Probox နဲ့ succeed အတူတူ ပဲ လို့ ထင်မြင်နေကြတာပါ။
ရုပ်ချင်း ဆင်တယ်ဆိုရင် ပိုမှန်မလား , အတွင်းပစ္စည်းကျတော့ရော တူနေပြန်ရော , ဒါပေမဲ့ နောက်မီးခွက် ကျတော့ ကွဲပြန်ရော , အဲ ရှေ့ မီးခွက်ကျ တူပြန်ရော။
ဘာတွေ မှန်းမသိ တော့ဘူး မောင်းကောင်းရင် ပြီးရော ကွာဆိုပြီး အလွယ်သာရွေးလိုက်ရပါလေရော။
☑ First generation လို့ ခေါ်တဲ့ ပရိုဘောက်ကို ၂၀၀၂ မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Commercial compact car အမျိုးအစား တံခါး ၅ ပေါက် နဲ့ ရှေ့ယက် သို့ 4WD နှစ်မျိုးထုတ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်ကတော့ ၂ မျိုးထုတ်ပါတယ် 1.3 L နဲ့ 1.5 L တွေပါ။
➽ 1.3 L 2NZ-FE I4
1.5 L 1NZ-FE I4 တွေတပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
1.3 L အင်ဂျင်တပ် ပရိုဘောက်မှာ
chassis အနေနဲ့ UA-NCP50 လို့ ထွက်ပြီး
1.5 L အင်ဂျင်တပ်ရင်တော့ UA-NCP58G / NCP55 / NCP51လို့ ထွက်ပါတယ်
( 4WD ဆိုရင် NCP59G )။
☑ ဘာဂရိတ်မှ မဖေါ်ပြတဲ့ ကတုံး ဆိုရင်တော့
NCP50 နဲ့ ထွက်လေ့ရှိပြီး မှန်လက်လှည့်/ မှန်ချိုး မပါ/ ဘက်မှန်အသေး နဲ့ လာလေ့ရှိပါတယ်
( DX လို့လည်းတပ်တတ်ပါတယ်)။
➽ DX grade အမှန်အကန် ဆိုရင်တော့
ဒရိုင်ဘာ မှန်တစ်ပေါက် ပါဝါ ဖြစ်သွားမယ်,
radio FM ပါပါတယ်။
➽ GL grade ကတော့
ရှေ့တံခါး ၂ ပေါက် ပါဝါ ဖြစ်သွားမယ်,
မှန်ချိုး မှန်ခေါက် ခလုပ်လေး ပါလာမယ်,
ကျန်တာကတော့ DX နဲ့ အားလုံးတူပါတယ်။
➽ F grade မှာတော့ 1.3 အနေနဲ့ မလာတော့ပဲ
မန်နူရယ် ဂီယာ ၅ ချက်နဲ့လည်း ထုတ်သလို ကတုံးလည်း ထွက်ပါတယ်။
မှန်းရအခက်ဆုံး ဂရိတ် လို့တောင် ပြောချင်ပါတယ်။
➽ F extra package မှာတော့
GL နဲ့ ဆင်တူ ပါတယ် ထူးခြားတာကတော့ နောက်ထိုင်ခုံ ခေါင်းမှီ ပါလာတာပါ။
F extra မှာ တံခါး ၄ ပေါက် ပါဝါနဲ့လည်း လာပါတယ်။
☑ Succeed မှာတော့ Probox ကို အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ လူစီး wagon အမျိုးအစား ဖြစ်သွားပါပြီ။ နောက်ဖုံးတံခါး , ရှေ့မီးခွက် , နောက်မီးခွက် နဲ့ အတွင်း ထိုင်ခုံတွေ မတူပါဘူး။
☑ UL, ULX , TX, TXG ဆိုပြီး ဂရိတ် ၄ မျိုး လောက်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး
chassis ကတော့ Probox နဲ့ သွားတူနေပါတယ်။ Succeed မှာကတော့
အင်ဂျင်ပါဝါ 1.5L 1NZ-FE I4 ဟာ standard ပါပဲ( တခြား အင်ဂျင်မတပ်ပါ)။
➽ UL ဂရိတ်မှာ က
အကွဲ ၂ မျိုးလောက်တွေ့ရပါတယ်။ ရှေ့ပါဝါ ၂ ပေါက် , မှန်ချိန် နဲ့ လာသလို , လက်လှည့်နဲ့လည်း လာပါတယ်။
➽ ULX ကတော့
ရှေ့ပါဝါ ၂ ပေါက် သို့ ၄ ပေါက် ပါပြီး ကျန်တာကတော့ အားလုံး နီးပါးပါဝင်ပါတယ်။
➽ TX grade ကတော့
ပါဝါ ၂ ပေါက် နဲ့ ထူးခြားချက် အဖြစ် မှန်ချိုး မပါဝင်ပါဘူး။
➽ TXG ကတော့
အစုံဆုံး ဂရိတ်လို့သာ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
ပါဝါ ၂ ပေါက် / ၄ ပေါက် , မှန်ချိုး, မှန်ချိန်, Alloy , back mirror heater စသဖြင့် တော်တော်စုံပါတယ်။
☑ Succeed တိုင်း ရဲ့ ထူးခြားချက်
နောက်တုတ် ဂရိတ်တိုင်းမှာပါသလို / ပါဝါ တစ်ပေါက် မရှိပါဘူး
( လက်လှည့် သို့ ၂ ပေါက် သို့ ၄ ပေါက်)။
➽ Succeed မှာ ဒီဇယ် အင်ဂျင်တပ် အမျိုးအစားလည်းထုတ်ပါတယ်,
1.4L 1ND-TV I4 D4-D ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကို
မန်နူရယ် ဂီယာ ၅ ချက်နဲ့ တွဲလာပါတယ်။
Probox ရဲ့ ဆီစားနှုန်း ကလည်း သက်သာလှပါတယ်။ ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့လို့ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းတဲ့ နေရာမှာ Probox ရဲ့ ဆီစားနှုန်းဟာ တခြားသော ကားအမျိုးအစားတွေထက် သာလွန် သက်သာနေပါတယ်။
🇲🇲 အောက်မှာ ပျှမ်းမျှ ဆီစားနှုန်းလေးတွေ ယှဉ်ပြထားပါတယ်,
• 2014 July မှာတော့
ပုံပြောင်း Probox နဲ့ Succeed ကို စတင်ရောင်းချ ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ဂျပန်မှာ ရောင်းချနေတဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။
F, GL, DX comfort , DX ဆိုပြီး ရောင်းချလျှက်ရှိပါတယ်,
့ NCP50 / 51/55/58/59 စသဖြင့် သုံးစွဲနေပါသေးတယ်။
➽ F grade မှာ ကတော့
ပါဝါ ၄ ပေါက် , နောက်ထိုင်ခုံ ခေါင်းမှီ, စီယာရင် logo နီကယ်, ဘီးဖုံး , တံခါးလက်ကိုင် ကားအရောင်တူ, ဘက်မှန် ကားအရောင်တူ, မှန်မည်း, remote key နဲ့ audio-less cover တွေ ပါဝင်မှာပါ။
➽ GL မှာတော့
ဘီးဖုံး မပါတော့ပါဘူး, ပါဝါ ရှေ့တံခါး ၂ ပေါက်ပဲ ပါမယ်, FM radio ပါလာမယ်, နောက်ခေါင်းမှီမပါတော့ဘူး, စီယာရင် logo ကတော့ နီကယ် မပါတော့ပါဘူး။ ကျန်တာ အားလုံးကတော့ F grade အတိုင်းပါပဲ။
➽ DX comfort မှာတော့
သံဂွေဘီးဖုံးမပါ, လက်ကိုင် နဲ့ နောက်တံခါး လက်ကိုင်, စီယာရင် လိုဂို အားလုံး အမည်းရောင် , ဘက်မှန် အမည်းရောင် ( အသေး) ဖြစ်သွားပြီး GL နဲ့ ကျန်တာ အားလုံးတူပါတယ်။
DX ကတော့ အနိမ့်ဆုံး ဂရိတ် ပါဝါ တစ်ပေါက် , ရိုးရိုးကီး , နဲ့ မှန်ချိုး မပါတော့ပါဘူး။
➽ Dashboard မှာ
slide table, ABS , driver cup holder စတာတွေကတော့ ကားအားလုံးမှာပါဝင်ပါတယ်။
1.3L နဲ့ 1.5L အင်ဂျင် ၂ မျိုး ကို super CVT-i transmission တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
1.5L အင်ဂျင်မှာသာ 4WD model ကိုရနိုင်ပါတယ်။
☑ Succeed အနေနဲ့ ထူးခြားသွားတာကတော့ ပုံပြောင်းချိန်မှာ လုံးဝ ပုံစံတူသွားတာပါပဲ။
ဂရိတ်လည်း ၄ မျိုး အတူတူ ထွက်ပါတယ်
TX, UL-X, UL နဲ့ U ပါ။
U = DX , UL= DX comfort, UL-X=GL, TX= F လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။
တစ်ခုပါပဲ Succeed မှာ 1.5 L အင်ဂျင်နဲ့သာ ထုတ်ပါတယ်။
အရောင်အနေနဲ့ ၆ ရောင်ထိ ရရှိနိုင်ပြီး
အဖြူ 058, အနက် 209, အစိမ်းနု 6U6 , ငွေမှင် 1E7, ဇီး 3R9 နဲ့ နက်ပြာ 8P4 တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
🇲🇲 ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မြန်မာတွေ သိပ်ခိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ပရိုဘောက်အကြောင်း အနည်းငယ်သိရှိပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဗဟုသုတ ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်
Friendship Car Showroom shared သုတဇုန်'s post.
ဒီလမ်းကိုတော့ The Passage du Gois လို့ခေါ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လမ်းတွေထဲက တစ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလို ထူးထူးခြားခြားလမ်းမျိုးကလည်း တစ်လမ်းပဲ ရှိပါတယ်။ နေရာကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ Burnef ပင်လယ်ကွေ့နဲ့
Friendship Car Showroom shared Htut Htake's post.
Htut Htake added5new photos.
ညီမလေးတစ်ယောက် တင်ထားတာတွေ့လို့ အားလုံးသတိထားနိုင်အောင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ
လူတွေ သတိမထားမိတဲ့ အန္တရယ် .. ...
ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ပါ .. နောက်လူတွေ ကိုယ့်လိုမဖြစ်ရအောင် အတွေ့အကြုံကို sharing
ကိုယ်တော့ accident နဲ့ပတ်သက်ရင် ဦးဆုံးဖြစ်ဖူးတာမို့လို့ တော်တော် shock ဖြစ်သွားတယ်
အမြဲတမ်း ကားကို နေပူထဲမှာရပ်ရင် မှန်နည်းနည်းလေးချပီးမှရပ်ပါတယ် .. အပူကြောင့် Pressure များရင် ကားမှန်အက်တတ်လို့ ပါ ..
ရုံးမှာရပ်ရင် အရိပ်ကောင်းမယ့်နေရာမှာအမြဲ ရပ်ပါတယ် .. ကား အရောင် မကျအောင်ကော တခြားရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ မတွေ့အောင်ကော အိမ်မှာထားလဲ ဂိုထောင်လုပ်ထားပီးအမြဲ အေးအောင် ထားပါတယ် ..
ဒီနေ့တော့ နေ့ချင်းပြန် ခရီးတစ်ခု သွားစရာရှိတာကြောင့် ကားကို ရုံးမှာရပ်ခဲ့ပီး တခြားကားနဲ့သွားခဲ့ပါတယ် ..
အမြဲရပ်နေကျ အရိပ်ရတဲ့သစ်ပင်ကြီးက လောလောဆယ် မီးကြိုးနဲ့မလွတ်လို့ ခုတ်နေတာမို့ အပင်ပေါ်က သစ်ကိုင်းကျိုးကျမှာစိုးလို့ လွတ်မယ့်နေရာ ရပ်ခဲ့ပါတယ်
ရပ်တဲ့နေရာက အရိပ်လုံးဝမရှိ နေပူပါတယ်..
အခုက မိုးရာသီမို့ မိုးပက်လို့ ကားမှန်ကို အပြည့်ပိတ်ထားတာကို ချခဲ့ဖို့မေ့သွားခဲ့ပါတယ် ..
တစ်နေကုန် ကားကို ဒီတိုင်းရပ်ထားမိခဲ့ပါတယ် ..
ကားကို နေပူထဲတစ်နေကုန် ရပ်ထားခဲ့မိတာအပြင် မှန်ချဖို့မေ့ခဲ့တော့ အပြင်အပူရှိန်တွေကြောင့် pressure ဝင်ပီး ကားနောက်မှန်မှာရှိတဲ့ air fresher ထဲက gas ထပေါက်ရာကနေ ကားရဲ့နောက်မှန်တစ်ခုလုံး အစိတ်စိတ်မွှာမွှာ ကွဲသွားပါတယ် ..
နောက်ခန်းရဲ့ မှန်နားမှာရှိတဲ့ air fresher ဗူးရဲ့ဖင်က ကားအရှေ့ခန်း lover seat ထိ ကန်ထွက်လာပါတယ် ..
မှန်ကွဲတွေ ကားနောက်ဖက် တစ်လံလောက်အကွာအထိ အပြင်ကိုကန်ထွကိပါတယ် ..
ပေါက်ကွဲသံတော်တော်ကျယ်ပါတယ် .. ရုံးဝင်းတစ်ခုလုံးကြားရတယ်လို့ ရုံးဝင်းထဲနေကြတဲ့သူတွေက ပြောပြပါတယ် ..
ကံသီပေလို့သာ အနီးအနားမှာကော ကားပေါ်မှာကော လူမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပါတယ် .. ရုံးပိတ်ရက်မို့လဲ တော်ပါသေးတယ် ..
မိန်းကလေးမောင်းတဲ့ ကားမို့ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်း ( မီးခြစ် ဖုန်း ဓါတ်ဆီ အင်ဂျင်ဝိုင် အရက်ပုလင်း) ဘာဆိုဘာမှကားပေါ်မရှိတာ အရမ်းကို ကံကောင်းတာပါ ..
မဟုတ်ရင် မတွေးရဲစရာ ..
ကိုယ်တိုင်က တစ်နေကုန် လမ်းပေါ်ရောက်နေလို့ အခုညနေ အိမ်ပြန်လာမှသိရပါတယ် ..
နောက်လူတွေလဲ ဆင်ခြင်နိုင်အောင် share လုပ်ပါတယ်ရှင့်
- Gas ပါတဲ့ပစ္စည်းဆို ဘာဆိုဘာမှ ကားထဲမထားတာ အကောင်းဆုံးပါ ..
- မီးခြစ် ဖုန်း ဖြစ်နိုင်ရင် ကားထဲမထားပါနဲ့
- ရေမွှေးပုလင်းတောင်မထားပါနဲ့ မွှေးချင်ရင် အမွှေးတုံးလေးပဲ ထည့်ထားကြပါ
-မတတ်သာလို့ ကားကိုနေပူထဲရပ်မယ်ဆိုလဲ မှန် လေးဖက်လုံး ၂ လက်မခန့် ချထားပါ ..
ကံထူးတဲ့ငါလေး သစ်ကိုင်းကျိုးကျမှာစိုးလို့ လွတ်တဲ့နေရာရပ်ကာမှ သစ်ကိုင်းမကျိုးပဲ ကံစမ်းမဲပေါက်တယ် 😑 😑 😑
ကံကောင်းပေလို့ နောက်မှန်လောက်နဲ့ပီးတာ ..
နောက်ဆို gas ပါတာဆို အအေးပုလင်းတောင် ကားပေါ်မတင်ရဲတော့ဘူး ..
Friendship Car Showroom shared One Two Nine Auto online car trading's post.
August 21, 2017 · Hlegu, Myanmar ·
Friendship Car Showroom shared MNTV News's video.
Posted by MNTV News
၁၂.၈.၁၇ ရက်နေ့ မနက်(၇)နာရီ ပြည်တွင်းသတင်း…
၄။ ရန်ကုန်တွင် နယ်လိုင်စင်ကားများနှင့် 9I- 1297 နံပါတ် အထက်ကားများကို ညအိပ်ခွန် မဆောင်ဟု ဆိုကာ ကျပ်ငွေ
တစ်သိန်း သို့မဟုတ် ငါးသောင်း ဒါဏ်ရိုက်နေ..
Friendship Car Showroom shared Suddin Ko Kyaw's post.
‎Suddin Ko Kyaw‎ to ကားပွဲစားတန်း(ရန်ကုန်)
YGN နံပါတ်ပေမယ့် 9I နောက်ပိုင်း စည်ပင်မြေမှာ ညအိပ်ခွန်ဆောင်လို့မရတာက parking permit နဲ့လျှောက်တဲ့ကားတွေမို့ စည်ပင်မြေမှာ ညအိပ်ခွင့်မပြုတဲ့သဘော
တစ်ချို့ကားတွေ ညအိပ်ခွန်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာက စလစ်ကပ်ပြီး ရန်ကုန်လိုင်စင်ယူထားတဲ့ကားတွေမို့ ပေးတာလို့ထင်တယ်
Friendship Car Showroom shared JDA OIL Myanmar's post.
JDA OIL Myanmar added3new photos.
ကားဘီးတာယာတွေ ထိန်းသိမ်း ရတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာ ဘီးအလိုင်းမင့် ပုံမှန်ချိန်ပေးရတဲ့အလုပ်က အရေးကြီး ပါတယ်။ အလိုင...်းမင့်အောက်နေတဲ့ ကားတစ်စီးမှာ တာယာပန်းသားတွေ စားကုန်ပါလိမ့်မယ်။ တာယာဘီးတစ် ဖက်ဖက်ကို ဆွဲနေတဲ့အတွက် မောင်း လို့မကောင်းပါဘူး။ စတီယာရင်ထိန်း လို့မကောင်းပါဘူး။ စတီယာရင်တွေကို အားစိုက်ပြီးထိန်းမထားရင် ကားမောင်း နေရင်း၊ တစ်ဖက်ကိုဆွဲချသွားနိုင်ပါ တယ်။ တာယာဘီးနှုတ်ခမ်းသားတွေ အစားမြန်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးမှာ စတီယာရင်ထိန်းရတာကောင်းဖို့ တာ ယာပန်းသားရာဘာကွန်ပေါင်းတွေ ပွန်းစားမှုသက်သာစေဖို့ ဘီးအလိုင်း မင့်ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ကားဘော်ဒီကိုယ်ထည်ချက်ဆီ နဲ့ ကားတာယာဘီးတွေတည်ရှိမှု၊ ရပ်တည်မှုတွေကြားမှာရှိနေတဲ့ ဂျီဩ မေတြီသင်္ချာဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစား၊ ဒီဂရီအတိုင်းအတာတေါကို ကားဘီး အလိုင်းမင့်လို့ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှထားပါ တယ်။ ကားတစ်စီးရွေ့လျားတဲ့အချိန် မှာ တာယာဘီးတွေနဲ့ ကားအောက် ပိုင်းဆပ်စပန်းရှင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ကို ကားအလေးချိန်နဲ့ ရွေ့လျားမှုဒိုင်းနမစ်အားတွေ သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်ရောက်အားတွေကြောင့် ကားတာယာဘီးတွေရဲ့ အလိုင်းမင့် သက်ရောက်အားတွေကြောင့် ကား တာယာဘီးတွေရဲ့ အလိုင်းမင့်တွေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အောက် ပိုင်းဆပ်စပန်းရှင်းတွေမှာရှိနေတဲ့ တိုက်ရော့၊ ဘောလ်ဂျွိုင်းနဲ့ ရာဘာ ဘွတ်တွေစားပြီး အလွတ်ကစားမှုတွေ များလာရင်လည်း ကားတာယာဘီး တွေ အလိုင်းမင့်ပြန်ချိန်ပေးဖို့လိုပါ တယ်။ ဘီးအလိုင်းမင့်ပြန်မချိန်ခင် ကားအောက်ပိုင်းစနစ်တွေကို စစ်ဆေး ပြီး လိုအပ်သလိုပြုပြင်ပေးရပါတယ်။
ကားဘီးအလိုင်းမင့်တွေ မှန်ကန် ဖို့ ကားအောက်ပိုင်းဆပ်စပန်းရှင်း အစိတ်အပိုင်းတွေကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဘီးအလိုင်းမင့်မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ ကား အောက်ပိုင်း ဆပ်စပန်းရှင်းစနစ်တွေ ဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်နေပါ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလမ်းတွေက ပေါက်ပြဲပြီး မကောင်းတာကများနေပါတယ်။ လမ်းမျက်နှာပြင်မညီမညာ ဖြစ်နေရင် အောက်ပိုင်းဆပ်စပန်းရှင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ ရှော့ပ်အတ်စော ဘာတွေ၊ ကြာကြာအသုံးမခံပါဘူး။ တာယာပန်းသားတွေလည်း ပျက်စီး ပွန်းစားမှုပိုမြန်ပါတယ်။ တိုက်ရော့၊ ဘောလ်ဂျွိုင်းတွေစားပြီး ချောင်နေ တာကို အချိန်မီမပြင်ဘဲ ဒီအတိုင်းပစ် ထားရင် တာယာပန်းသားတွေ ခဏ လေးနဲ့ စားကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးအန္တ ရာယ်များတာက ဘောလ်ဂျွိုင်းပြုတ် ထွက်ပြီး ကား accident ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။
ကားဘီးအလိုင်းမင့် ဂျီဩမေတြီ ထောင့်တန်ဖိုးအခြေခံ ၃ မျိုးကို တိုင်းရပါတယ်။ Toe Anlge လို့ခေါ် တဲ့ တိုးအင် (Toe-in) တိုးအောက် (Toe-out)၊ ကမ်ဘာနဲ့ ကတ်စတာတို့ကို ချိန်ညှိ ရပါတယ်။ တိုးအင်-တိုးအောက် (Toe-in/ Toe-out) ဆိုတာဘာလဲ။ ဘီးအလိုင်း မင့်တန်ဖိုးတွေထဲမှာ တိုးအင်၊ တိုး အောက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ကား ရှေ့ဘီးတစ်စုံကို ဘယ်-ညာချိုးကွေ့ နိုင်ဖို့အတွက် စတီယာရင်နဲ့ တိုက် ရော့ဒ်ဆက်သွယ်မှု၊ တိုက်ရောဒ်နဲ့ စတီယာရင်နတ်ကယ်အမ်း ဆက် သွယ်မှုတွေရှိပါတယ်။
ကားရှေ့ဘီးတာယာ ၂ လုံးကို အပေါ်စီးကနေကြည့်ရင် ရှေ့ပိုင်းအကွာအဝေးက နောက်ပိုင်းအကွာအဝေး ထက် နည်းနည်းလေးပိုပြီး တိုဝင်နေပါတယ်။ တာယာဘီး ၂ လုံးစလုံး ဟာ ရှေ့ကိုစုဝင်နေတယ်။ ဒီလိုမျိုး တာယာဘီးနောက်ပိုင်းအကွာအဝေး ထက် ရှေ့ပိုင်းအကွာအဝေးက ပိုပြီး စုဝင်နေတာကို Toe-in ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ကားရှေ့ဘီးတာယာနှစ်လုံးဟာ အပေါ်စီးကနေကြည့်ရင် သီအိုရီသ ဘောအရ မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက ရှေ့ပိုင်း တာယာအကွာအဝေးနဲ့ နောက်ပိုင်း တာယာအကွာအဝေး၊ ထပ်တူကျနေ ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးထပ်တူကျပြီး မျဉ်း ပြိုင်ဖြစ်နေတာကို “Zero Toe” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကားနောက်ဝင်ရိုးတန်း မှာ အသေတပ်ဆင်ထားတဲ့ နောက် တာယာဘီး ၂ လုံးဆိုရင် မျဉ်းပြိုင် ဖြစ်ပြီး အမြဲတန်း “Zero Toe” ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ဘီးတာယာ ၂ လုံးကို တော့ လက်တွေ့မှာ”Zero Toe” (မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေခြင်း) ထားလို့မရပါ ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှေ့ဘီး တာယာနှစ်လုံးဟာ အလွတ်ကစား နိုင်လို့ပါဘဲ။ ရှေ့ဘီးဆိုတာ နောက် ဘီးလို အသေတပ်ထားတာမဟုတ် ဘူး။ စတီယာရင်ချိုးကွေ့ကစားနိုင်တဲ့ တာယာဘီးဖြစ်နေတာကြောင့် တိုက် ရော့ဒ်၊ ဂေါ်လီခေါင်းနဲ့ စတီယာရင် လင် (Link) အဆက်တွေဟာ အလွတ်ကစားမှုတွေရှိပါတယ်။ ကား အောက်ပိုင်းချုပ်တန်း၊ ရာဘာဘွတ် တွေကလည်း အလွတ်ကစားနိုင်ပါ တယ်။
လမ်းပျက်နှာပြင်ပေါ်က ချိုင့်ခွက် တွေ၊ လိုင်းတွေကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘရိတ်နင်းအုပ်လိုက်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှေ့ဘီးတာယာနှစ်လုံးဟာ မျဉ်းပြိုင် ဖြစ်နေရာကနေ ဘေးကိုကားထွက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အလွတ် ကစားပြီး ရှေ့အဖျားကားထွက်သွား တာကို ထေမိကာမိစေဖို့ Toe-in အ နေအထားကို ချိန်ညှိပေးရပါတယ်။ ကားအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး Toe-in ပမာဏဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆို တာ သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ လူစီး ကားငယ်တွေမှာတော့ ယေဘုယျရှိ သင့်တဲ့ Toe-in ပမာဏကတော့ (1/16 inch) ရှိရပါတယ်။ ကားထုတ်လုပ် သူတွေကတော့ ကားအမျိုးအစားအ လိုက် worskhop Manual လက်စွဲ စာအုပ်မှာ အလိုင်းမင့် specification တွေ၊ ဘယ်လောက်ထားပြီးချိန်ရမလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Toe-out ဆိုတာကတော့ ကား ရှေ့ဘီးတာယာတစ်စုံကို အပေါ်စီးက နေကြည့်ရင် တာယာရှေ့ပိုင်းက နောက်ပိုင်းထက် ပိုပြီးကားထွက်နေတာကို ပြောတာပါ။ တိုက်ရော့ဒ်အဖျားပိုင်း ဂေါလီခေါင်းတွေချောင်နေ တာ တန်းဘွတ်တွေစားနေတာတွေကြောင့် ရှေ့ဘီးတာယာတွေကားထွက်နေတာ ကို Toe-out ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါ တယ်။ Toe-out ဖြစ်ရင် များလွန်း ရင် တာယာပွတ်တဲ့ တကျွီကျွီမြည် သံတောင် ကြားရပါတယ်။
ကမ်ဘာ (Camber) အကြောင်း ကို ဆက်ပြီးပြောပါ့မယ်။ ကားတာ ယာဘီးတွေကို ရှေ့တည့်တည့်အနေ အထားကနေကြည့်ပါ။ လမ်းမျက်နှာ ပြင်နဲ့ တာယာဘီးဟာ ထောင့်မှန်ကျ ပြီး ၉၀ ဒီဂရီရှိရပါတယ်။ သီအိုရီသ ဘောက ထောင့်မှန်ကျရတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ကားတာယာဘီး တွေဟာ ချိန်သီးကြိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရင် အပြင်ကို ကားထွက်နေ တာမျိုး သို့မဟုတ် အတွင်းကိုဝင်နေ တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးချိန် သီးကြိုး မတ်မျဉ်းကနေတဲ့ ထောင့် ဒီဂရီတန်ဖိုးကို ကမ်ဘာ (Camber) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကားတာယာဘီးအ ပေါ်ပိုင်းက အပြင်ကိုကားထွက်နေ တာမျိုးကို Positive Camber လို့ခေါ် ပြီး အတွင်းပိုင်းကို စုဝင်နေတာမျိုးကို Negative Camber လို့ခေါ်ဆိုသတ် မှတ်ပါတယ်။
Positive Camber ဖြစ်နေတဲ့ ကားမှာ စတီယာရင်နတ်ကယ်အပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့အားတွေက Spindel Base နဲ့ ပိုပြီးနီးကပ်သွား တာကြောင့် Steering Knuckle ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဝန်အားတွေကို လျော့ကျသွားစေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Positiver Camber ဖြစ်ရင် ကားဘီးတွေကို အတွင်းဘက်တွန်းပို့ ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘီးဖြုတ် ထွက်တာမျိုးကို ကာကွယ်ပေးပါ တယ်။ Negative Camber ကတော့ ကားကွေ့တဲ့အခါမှာ တဖက်ကိုတိမ်း စောင်းသွားတာမျိုးကနေ ထောက် ကန်ပေးထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် ရှေ့ဘီးယက် (Front-wheel driver) ကားတွေမှာတပ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။
စတီယာရင်ဝင်ရိုးတန်းမျဉ်း (Axis) ကို ဘေးတိုက်အနေအထား ကြည့်ရင် ချိန်သီးမတ်မျဉ်းကြိုးကနေ နည်းနည်းစောင်းနေတာကို တွေ့နိုင် ပါတယ်။ ဒီလိုစောင်းနေတဲ့ ဒီဂရီကို caster လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကတ်စတာ မှာ အပေါင်းကတ်စတာနဲ့ အနုတ် ကတ်စတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ နောက်ဘက်ကို ဒီဂရီနည်းနည်းစောင်း နေရင် အပေါင်းကတ်စတာ Positive Caster ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဘက်ကိုစောင်းနေ ရင်တော့ အနုတ်ကတ်စတာ (Negative Caster) ဖြစ်ပါတယ်။
Positive Caster ရှိတဲ့ကားမှာ စတီယာရင်ကစားရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိပါတယ်။ အပေါင်းကတ်စတာရဲ့ အ ကျိုးသက်ရောက်မှုက ကားတာယာ ဘီးတွေကို ရှေ့တည့်တည့်မှာ အမြဲ တမ်းရှိနေအောင် ထောက်ပံ့ပေးပါ တယ်။ ကတ်စတာဒီဂရီတန်ဖိုးက သတ်မှတ်ချက်ထက်များနေရင် မ ကောင်းပါ။ စတီယာရင်တစ်ဖက်ကို ဆွဲနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကားအောက်ပိုင်းဆပ်စပန်းရှင်း အစိတ်အပိုင်းတွေမကောင်းတာပြုပြင် ပြီးရင် ကားဘီးတွေကို အလိုင်းမင့် ချိန်ပေးရပါတယ်။ ရှေ့ဆွဲ၊ ရှေ့ယက် ကားတွေကို အလိုင်းမင့်ချိန်ရင် ရှေ့ ဘီးရော၊ နောက်ဘီးပါ ချိန်ပေးရပါ တယ်။ ကားဘီးတွေ အလိုင်းမင့်မှန် မှ ကားမောင်းရတာ စတီယာရင် ထိန်းရတာကောင်းပါတယ်။ တာယာ ပွန်းစားမှုဖြစ်တာတွေလည်း သက် သာစေပါတယ်။
ဒီခေတ်မှာ နည်းပညာတွေတိုး တက်လာတာနဲ့အတူ ကားဘီးအလိုင်း မင့်ချိန်တဲ့ စက်ကိရိယာတွေလဲတိုး တက်နေပါပြီး ခေတ်မီကွန်ပျူတာစ နစ်သုံး လေဆာရောင်ခြည်နဲ့ ဘီးအ လိုင်းမင့်ချိန်ပေးနိုင်တဲ့ ဆားဗစ်စင်တာ တွေမှာဘဲချိန်ပါ။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ ကောင်းတွေအပြင် Alignment Specification တွေ တိကျဖို့လိုပါ တယ်။ ဘီးအလိုင်းမင့်ပုံမှန်ချိန်ပြီး စစ်ဆေးပေးခြင်းဟာ ကားအောက် ပိုင်းကိုပါ တခါးတည်းစစ်ဆေးနိုင်တာ ကြောင့် သင့်ကားရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံ မှု (Safety) အတွက် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်း ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Friendship Car Showroom shared ပျှော်ရွှင်စရာ ဥာဏ်စမ်းကမ္ဘာ's post.
ပျှော်ရွှင်စရာ ဥာဏ်စမ်းကမ္ဘာ added 10 new photos.
ခရီးသွား ကားအိမ် တွေထဲမှ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသော Luxury RV ကားအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်... 😃 😃 😃
Friendship Car Showroom shared Smart is the New Sexy's video.
With public transport like this, traffic jams won't be an issue anymore! :D
via Dahir İnsaat, www.facebook.com/Panel.monolit/, youtube.com/user/dahirsem/videos
ကား တစ်စီး ကို ထုတ်လုပ်သော ရက်/လ/ခုနှစ် စစ်ဆေးမယ် ။
©©တစ်ချို့တွေ မေးကြလွန်းလို့ပါ ။
မသိသေးသော သူများအတွက်ပါ ။
® ပထမ နည်း ...
ဒီ Link က ဝင်ရင်
>>find ကို နိုပ်
® ဒုတိယ နည်း ...
ဒီ Link က လည်းဝင်ရ
>>find year ထဲဝင်
ကဲ အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ။